Archive du 02-juin-2022
Fanomanana kitoatoa Nandohalika indray ny Barea
Ratsy fanombohana, nomontsanin’ny Black Stars-n’i Ghana tamin’ny isa mavesatra 3-0 ny Barean’i Madagasikara omaly tamin’ny lalao voalohany amin’ny fifanintsananana hiakarana amin’ny CAN 2023.
Fampanantenana valamaty sisa
Tsy nisy fanjakana nampanantena zavatra betsaka indrindra sy fampandrosoana tsy hita pesimpesenina tahaka ity tao anatin’ny taon-jato maro teto amin’ny firenena. Lasa mivadika hoe:
Banky Iraisam-pirenena «Tena mila fanaovaozana ara-paikady ianareo »
Nahena ho 2,6% ny vinavinan’ny fiakaran’ny toekaren’i Madagasikara ho an’ity taona 2022 ity raha 5,4% no nofaritan’ny Fanjakana tany am-boalohany.
Sabotsibe Maty voatifitra ny Zandary ilay dahalo nitsoaka
Taorian'ny fifanjevoana tamin'ireo dahalo tao Vohilolo Beandrarezona, fokontany Lampibe, kaominina Marotandrano, distrika Mandritsara ny alarobia 25 may 2022 dia vaky nandositra izy ireo ka tsy nisy voasambotra,
Anosy Nifandona ny polisy kaominaly sy ny mpivarotra
Tohana mafy ireo mpivarotra tetsy Anosy manoloana ny radiom-pirenena Malagasy omaly. Efa hatramin’ny afak’omaly talata mantsy izy ireo no tsy nisy tany niainana fa nokorontanin’ny polisy kaominaly tsy afaka nivarotra, raha any fitarainan’ireo mpivarotra.
Notorian'i Dr Edmond Halentika indray i Ny Rado Rafalimanana ?
Notondroin’ny mpikaroka ara-pitsaboana nenti-paharazana Edmond Rakotomalala nahita ilay fanafody ED1 ho mpisoloky sy mpisandoka ny anarany sy ny voka-pikarohany i Ny Rado Rafalimanana fantatra amin’ny tontolon’ny
OLIVIER RAKOTOVAZAHA ‘’Manahy korontana mialohan’ny fifidianana izahay’’
Naneho ny heviiny momba ny raharaham-pirenena nandritra ny fandaharana Bemiray tao amin’ny Top Radio omaly Atoa Olivier Rakotovazaha,
Fiakaran-karaman’ny tsy miankina Tsy hita popoka ilay didim-panjakana hatramin’izao
Mihazakazaka ny fotoana, saingy mihisatra kosa ny fanapahan-kevitra na dia mailaka aza nitady doka sy tehaka tamin’ny mpanara-baovao! Io no mahafintina ny tsy mbola namoahan’ny Fanjakana hatramin’izao ny didim-panjakana
Tanamasoandro Inona no tambiny ho an'ny Arabo ?
Ny vondrona Al Jaber, izay vondrona matanjaka anisan'ny nanangana ireo fotodrafitrasan'ny tanan'i Dubai sy Abu Dhabi izay fantan-daza maneran-tany no ho mpiara-miombon'antoka amin'ny Fanjakana Rajoelina amin'ny
Jiolahy saika hanao fanafihana Lavon’ny balan’ny polisy rehefa nikasa handositra
Tsy milamina ny fandriampahalemana ao anatin’ny kaominina Alasora, distrikan’Antananarivo Avaradrano.
Randrana sendikaly Miandry ny CIPRES hitsirika ny CNaPS
Sahirana ankehitriny ireo mpikambana miisa 800.000 ao amin’ny CNaPS, noho ny tsy fahaiza-mitantana ao, hoy ny Randrana sendikaly. Saika hitondra vahaolana isika,
BIG MJ Naodina tany ivelany ny ankamaroan’ireo hirany
Namoaka ny raki-kirany vaovao mitondra ny lohan-teny hoe : Mpanjaka i Big MJ omaly na Toetran’i Aina Parfait, anarana nomen-dReniny azy. Ahitana audio sy DVD izany, izay marihina fa tena raitra tokoa ary hamidy amin’ny
HE Mada “Misy vahaolana tsara lavitra noho ny teleferika”
Miombona amin’ny tokony hisian’ny fikaonan-doham-pirenena mialohan’ny fifidianana ny antoko politika HE Mada, hoy ny mpikamban’ny birao maharitra eo anivon’ity antoko ity, Nantenaina Rakotonirina.
Ambalavary Mahabo Olona 3 nisy naka an-keriny, zaza ny iray
Manomboka mahazo vahana indray ny fakana an-keriny any amin’ny distrikan’i Mahabo. Olona miisa 3 izay ahitana zaza iray no indray nalain’ny dahalo an-keriny omaly tao amin’ny faritra Ambalavary,
Fihinanana sakafo vita amin’ny ronono 7 kg isan-taona isan’olona monja ny eto Madagasikara
Mbola tena ambany ny tahan’ny fihinanana ireo sakafo vita amin’ny ronono eto Madagasikara. 7 Kg isan-taona isan’olona mantsy izany raha tsy mahatratra 1 litatra isan’olona isam-bolana ihany koa ny fisotroan-dronono,
TENY GASY Mpanjaka Elizabeth : fitopolo kely fitopolo
Fitopolo taona (1952-2022) androany no niakaran’i Elisabeth II ho Mpanjakan’i Englanda sy Great-Britain.